I-Sony isayine ikota yayo yokuqala ngokubhekisele kwintengiso | I-Androidsis
Siyazi ixesha elide ukuba imeko kwicandelo leefowuni zikaSony ayisiyiyo eyona. Kwi-2018, uphawu lwaseJapan lathengisa iifowuni ezizizigidi ezi-6,5 kwihlabathi liphela. Eli lelona nani lisezantsi ukuza kuthi ga ngoku, isibonakaliso esihle sokwehla kwegama kwintengiso kule minyaka idlulileyo. Ekuqaleni kwalo nyaka utshintsho kwinkampani belusele lubhengeziwe, ngokulungelelaniswa kwamacandelo ayo.
Ngaphandle koku, ukuthengisa kwenkampani akuzange kube yeyona nto ibalaseleyo ekuqaleni konyaka. Ukongeza, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba uSony uza yeka ukuthengisa iifowuni eLatin America. Ngoku, sine ukuthengisa okuqinisekileyo kwikota yokuqala yonyaka.
Inkampani ityikitye eyona kota yokuqala imbi kwimbali ngo-2019. Njengoko kunokwenzeka ukwazi, U-Sony uthengise iifowuni eziyi-1,1 yezigidi kwihlabathi liphela kwiinyanga ezintathu zokuqala zalo nyaka. Azange ngaphambili bathengise okuncinci kwihlabathi jikelele. Isampulu entsha yomzuzu wakhe ombi.
Nangona kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba inkampani ayikhange isungule nayiphi na ifowuni kwintengiso kwikota yokuqala yonyaka. Nangona ikwi-MWC 2019, ebibanjwe ekupheleni kukaFebruwari, inkampani yazisa ngeemodeli zayo ezintsha, Xperia 1 y Xperia 10Akukho nanye kwezi fowuni sele ikhutshelwe ezivenkileni okwangoku.
Kuyenzeka ukuba xa ezi modeli zintsha zakwaSony zifike kwintengiso intengiso inokwanda. Ngayiphi na imeko, inkampani iya kuthi izibekele injongo yokugqitha kwintengiso yonyaka ophelileyo, eyona imbi kwimbali yayo ukuza kuthi ga ngoku. Ke kuyakufuneka ubone ukuba ngaba ezi fowuni zihlaziyiweyo zenza okuthile na ukutshintsha oku.
Ngakolunye uhlangothi, ungayikhuphi ngaphandle into yokuba uSony ubhengeze ukusuka kwayo kwezinye iimarike, njengoko kwenzekile kwiLatin America. Inkampani ikhetha ukugxila kwimarike kwezo zithengisa kakuhle. Ke kungakho utshintsho kwezi nyanga. Injongo yenkampani kukuhlala kwimarike yomnxeba ngalo lonke ixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » I-Sony isayina ukuthengisa kwayo okubi kakhulu kwikota yokuqala
I-Samsung Galaxy Note 10 Pro iya kufikelela kwi-4.500 mAh